:: My Little World ::: A New Cartoon Every Morning!
Posted by Nay Nay Naing at 3/09/2009 11:30:00 AM
မိုးတွေ ကလည်း စွေ.
ကြိုက်တာ လေး တစ်ခုလောက် link ထည့်ပေးပါ. ဒါဆိုရင်လည်း အပြစ်မရှိပါဘူး။ ကလစ်လိုက်ရု့ဘဲ။
ပျင်းလွန်းလို့ပါ N2 ရယ်။
(လာလည်တတ်တယ်ဆိုလို့ကျေးဇူး။ ဖတ်သွားတယ် ဆိုလို့ ပိုကျေးဇူး။။။။။။။)
တို့ကဗျာလေး သိတ်ကောင်းတယ်။ ပြန်ကူးသွားဦးမှဘဲ။
poem of the day လုပ်လိုက်တယ် ။ ဟိဟိ. ကျေးဇူး။ ရင်ထဲက စကားတွေ ကို stimulate လုပ်ပေးလို့။။..အာဘွား။
Monday, March 09, 2009 12:53:00 PM
ပျင်းရင် ကာတွန်းလေးကြည့်လိုက်...သီချင်းလေးနားထောင်လိုက်နဲ့ တယ်ဟုတ်နေပါလားနော်...အပေါ်က တစ်ယောက်က မန့်တာများလွန်းလှချည်လားကွယ်...နောက်ဆုံးတော့ ပိုစ်အတွက်ပါ ကုန်ကြမ်းရသွားလိုက်သေး...
Monday, March 09, 2009 8:32:00 PM
N2 စတဲ့ဇတ်လမ်းပြန်လာကြည့်ဦး။ ကွန်မက်တွေ ကိုဖတ်ပါ။ တို့အသည်းကွဲနေတာ ကို ဝိုင်းပြိး လောင်နေကြတယ။်
မ KOM .. တစ်ယောက်တည်း ကွန်မန့် တွေအများကြီး ရေးသွားတယ်။ ပထမဆုံးကြုံဖူးခြင်း ဖြစ်ပဲ။ တစ်ယောက်တည်းနဲ့စည်ကား သွားလို့ကျေးဇူးပါပဲ။ :-)
လင့်ထည့်ပေးချင်ပါသော်လည်း ပျင်းနေလို့ထပ်မထည့်တော့ဘူး.. တစ်ခုခု ကြည့်ချင်တယ်ဆို ပထမပေးထားတဲ့ လင့်ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်... Today Cartoon ရှိတယ်.. တစ်နေ့ တစ်မျိုး ပြောင်းတယ်..
ကြည်.... ဘ၀ကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်း နေထိုင်နိုင်ဖို့ သာ ကြိုးစားပါ။ အချိန်ပေးပြီး သီချင်းတွေ နားထောင်ပါ။ ကာတွန်းတွေ ကြည့်ပါ။ ပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင်နေပါ။ စားစရာရှိတာ စားပါ။ အိပ်ရေး၀၀ အိပ်ပါ။
မ KOM ... ဘာကြောင့် အစ်မရေ အသည်းကွဲတာလဲ.. လို့ သာ မေးလိုက်ချင်တယ်..
ကွန်မန့် တွေဖတ်ပါတယ်.. ဘာကြောင့် ဘာကြောင့် ကဗျာစပ်ပြီး၊ ဘာကြောင့် အသည်းကွဲသွားတာမှန်းမသိလို့ ... ဘာပြန်ရမယ် မှန်းမသိဖြစ်ပြီး ... ဘာမှ ပြန်မရေးဖြစ်တာပါ။
Monday, March 09, 2009 10:19:00 PM
အဲဒါဆိုလဲ ဟိုရေးဒီရေးဘဲ ရေးပါတော့လေ။
Tuesday, March 10, 2009 5:17:00 AM
ဒီကဗျာ လား ဘာလား ခေါ်ရမလား မသိတဲ့စာစု ကို နေနေနိုင်ဘလော့ ကို သွားလည်ရင်းနဲ့ စိတ်ကူးပေါက်လာလို့ ရေးခဲ့တာ ကို ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ကြိုက်လို့ ပြန်ကူးလာပြီး ပိုစ်တင်လိုက်တာပါ။
မ KOM .. အရင်ပိုစ့်က ကွန်မန့် တွေကိုလည်း ဖတ်ဖြစ်ပါ၏။ day of the poems ကိုလည်း ထပ်ဖတ်ဖြစ်ပါ၏။